Imibuzo evame ukubuzwa - Dongguan Hengyao Ultrasonic Machinery Co, Ltd.
Injani insizakalo yokuthengisa ngemuva?
Sinikeza unyaka ongu-1 wokuqinisekisa nokusekelwa kwezobuchwepheshe impilo yonke. Zonke izingxenye zomshini zingashintshwa mahhala kungakapheli unyaka owodwa uma ziphukile (ngaphandle kokusebenza kwephutha).
Ingabe kunzima ukufaka umshini?
Isitolo sokusebenzela kufanele silungiselele indawo ephelele njengamandla ne-air compressor. Ngokufakwa kokuqala, kuzothunyelwa unjiniyela ukusetha umshini futhi enze ukuqeqeshwa komshini inqobo nje uma kufundiswa ngesandla. Ukuze kuphume izinkinga ezengeziwe, singanikeza nokufundiswa ngevidiyo.
T / T, 50% idiphozi ngaphambi kwe-oda, 50% ibhalansi yokukhokha ngaphambi kokuthunyelwa.
Yini isikhathi sokuhola somshini?
Okwemishini ejwayelekile, singakwazi ukulethwa zingakapheli izinsuku ezingama-30. Uma kwenziwa ngokwezifiso ngamakhasimende (i-OEM), isikhathi sokuhola yizinsuku ezingama-45-55.